Soo Iibso 10Pcs Ilmaha & Carruurta EVA Play Floor Mat - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
10Pcs Ilmaha & Caruurta EVA Play Floor Mat
$ 23.99 qiimaha joogtada ah $ 26.99
Color Number Batman A Superman isku qasan Trojans Shan xiddig fiiqan Geedka kirismaska Hagaha Taajka boqortooyada Mickey Hellokitty Wadnaha qaabeeya Cajiib Midab cad
10PCS / Lambarka 10PCS / Batman A. 10PCS / Superman 10PCS / isku dhafan 10PCS / Trojans 10PCS / Xiddiga shan gees leh 10PCS / geedka kirismaska 10PCS / Raadadka 10PCS / Imperial taaj 10PCS / Mickey 10PCS / Hellokitty 10PCS / Wadnaha qaabaysan 10PCS / Feyl 10PCS / Midab cad
10Pcs Ilmaha & Caruurta EVA Play Floor Mat - 10PCS / Number gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Features: Jilicsan, Waxbarasho, Ciyaaraha, Muusig malaha
Age Range: > 3 Sano Jir
Nooca: Kala qaybso Joint
Cabirka: 30 * * 30 1cm
Rack for Buste Game ama Ma: maya
Nambarka Tusaalaha: 321452
Digniin: Matxafka Eva
Sariirta Caruurta Saqafka: Kids Rug, WIlmo-xanaaqa ka-hortagga carruurta
Xidhmada: 10Pcs = 1Pack
Mats waa alaabooyin xumbo leh, xumbo yaryar ayaa ah dhibaatooyinka warshadaha, fadlan ha ku xerin daloolka dhabarka.
Filimka bay'ada ee xiisaha u adkaysta ee aan sunta lahayn, ayaa si fiican u ilaaliya caafimaadka ilmaha, laakiin sidoo kale kalsooni dheeraad ah ayaa lagu sii daayaa Hooyo iyo Aabe. Marka si fudud ayaa loo sifeeyay
Dabacsanaan xoog leh, ayaa loo isticmaali karaa sariirka difaaca
Cad-yar-yar, ku-haynta, fududeynta qaadashada, iyo sahal-dhaqista. deriskani waa saaxiibkaaga ugu fiican inta aad ku jirtid qolkaaga jiifka, dalxiiska, iyo riwaayadaha.
Shakeless, nuugista codka, waxaa loo isticmaali karaa mashiinka dharka lagu dhaqo, microwave oven, iyo wixii la mid ah.
Ka caawi kobcinta maskaxda iyo nidaamka aragga.
Sariirku waa fiican yahay! wax walba waa qaboobaaxsan yihiin, si dhakhso leh ayay u yimaadeen, hadiyad ahaan dhinacyada.
Waan ku faraxsanahay iibsiga, mabda 'ahaan, sidii aan rabay, markaan soo aruuriyey illaa dhammaadka waxaan ku kordhin doonaa dib u eegista.
Si dhakhso leh ayay u yimaadeen. Dhinac, si siman, dhinaca kale leh wareejin. Ilmaha aan garanaynin sida loo gurguurto ayaa markiiba masaxay jilbihiisa jilicsan. Markaa dharka ama anigu garan maayo. Diirimaad, geesiyaal ayaa ku yaal geeska. Waxay urta, way fududahay in la nadiifiyo.
Mahadsanid dukaanka, produkt si dhakhso leh ayuu kuyimid ... 2weeks on slokak republ8k